Macluumaadka koronafayras - USAHello
Englishالعربية (Arabic)简体中文 (Chinese)(فارسی)/دری (Persian/Dari)Français (French)SomaliEspañol (Spanish)Tiếng Việt (Vietnamese)
Caawinta muhaajiriinta, qaxootiga iyo magangalyo-doonka sidii ay u fahmi lahaayeen fayraska iyo sida amaan loo badbaadiyo.
Waxaa jira koronafayras cusub oo ku faafaya adduunka kaasoo sababa xanuunka COVID-19. Dadka meelkasta waxay ka wada shaqeynayaan inay isku dayaan inay yareeyaan faafitaanka feyruskan isla markaana ey badbaadiyaan nafaf. Bogaggani waxay bixinayaan macluumaad caafimaad oo tarjuman oo kayimid ilo aamin ah. Waxaad sidoo kale kaheli doontaa warar-cusub oo muhiim ah oo ku saabsan sharciyada socdaalka, lacagta, iyo caawimaad loogu talagalay waalidiinta. Waxaan halkan ujoognaa si aan ucaawinno. Haddii aad ubaahantahay macluumaad dheeri ah, waxaad weydiin kartaa [email protected].
Ogow sida aad naftaada iyo qoyskaagaba uga dhigto kuwa caafimaad qaba. Ka ilaali naftaada iyo dadka kale infekshanka. Fahan tilmaamaha iyo waxa la sameeyo. Baro sida loo joogo adigoo caafimaad qaba
Dhamaanteen waxaan ka baqeynaa waxa dhici doona hadii aan xanuunsanno. Laakiin qof kastaa wuu heli karaa caawimaad Diyaari naftaada iyo qoyskaagaba. Ogow waxa la sameeyo haddii qof xanuunsado. Hel caawimaad
Qof walba ayaa walwalsan hadda. Laakiin haddii aad gudaha mareykanka kutahay soogalooti, qaxooti, ama magangalyo-doon, waxaa laga yaabaa inaad qabto walwal dheeraad ah. Boggan wuxuu leeyahay macluumaad muhiim u ah bulshooyinka soogalootiga ah. Hel macluumaad loogu talagalay dadka cusub.
Tani waxey waqti aad u adag utahay waalidiinta. Laakiin waxaa jira habab taageero loogu helo waalidiinta sidoo kale lagu caawiyo caruurta inay caafimaad qabaan oo ay dareemaan amaan. Hel macluumaad loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
Miyaad weyday shaqadaada? Ogow inaad heli karto kaalmada dowladda iyo waxaad sameyn lahayd haddii aadan u qalmin. Hel caawimaad
Waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan Koronafayras. Sideed ku ogaan kartaa waxa runta ah iyo waxa aan runta ahayn? Waxaan kaa caawin karnaa inaad ka nabad gasho wararka beenta ah iyo khayaanooyinka. Hel macluumaad wanaagsan
Macluumaadkaan waxaa uu kayimid ilo lagu kalsoonyahay, sida Xarumaha Xakamaynta Cudurada iyo Ururka Caafimaadka Adduunka. USAHello ma bixiso talo sharci ama la talin caafimaad, mana jiraan waxyaabo aan leenahay oo loogu talagalay in loo qaatto talo sharci ahaan ama talo caafimaad. Macluumaadkeenna caafimaad waxaa dib u eegay xubin ka tirsan guddiga USAHello ee Tej Mishra, oo ah xirfadle ku xeel dheer caafimaadka guud ee Mareykanka iyo cudurka faafa.
Adeegso FindHello si aad u raadsato caawimaad iyo kheyraadka kuugu dhow. Raadi latalin shaqo, qareenno, daryeel caafimaad, fasallo Ingiriisiga ah iyo adeegyo kale oo ka jira bulshadaada.
Bilow wax raadintaada
Xarumaha Xakameynta Cudurka iyo Kahortagga